Football Khabar » बार्सिलोनाविरुद्ध जिदानको रेकर्ड !
बार्सिलोनाविरुद्ध जिदानको रेकर्ड !
स्पेनिस रियल मड्रिडका प्रमुख प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले चर्चित खेल इएल क्लासिकोमा रेकर्ड बनाएका छन् । गत बिहीबार बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा सिजनको पहिलो क्लासिको बराबरीमा रोकिएपछि जिदानका नाममा रेकर्ड बनेको हो ।
रियलमा दोस्रोपटक प्रमुख प्रशिक्षकको पद सम्हालिरहेका जिदान अब बार्सिलोनाको घर क्याम्प नाउमा लगातार ५ खेलसम्म अपराजित रहने पहिलो प्रशिक्षक बनेका छन् । रियलको इतिहासमा यसअघि कुनै पनि प्रशिक्षक यस्ता थिएनन्, जसले सम्हालेको टोली बार्सिलोनाको घरमा ५ खेलसम्म नहारेको होस् । गत बिहीबारको खेल क्याम्प नोउमा ०–० मा सकिएको थियो ।
जिदानको नेतृत्वमा रियलले बार्सिलोनाको घरमा खेलेका पछिल्ला पाँच खेलमा तीन खेलमा रियलले बार्सिलोनालाई उसकै घरमा हराएको छ भने तीन खेल बराबरीमा रोकिएका छन् । हेरौं तस्बिरमा :
प्रकाशित मिति ५ पुष २०७६, शनिबार ०९:५८